हुनेलाई उल्लास, नहुनेको सधैं घरझगडा
नरहरि पौड्याल पोखरा, १७ असोज
शान्तिवनकी शर्मिला थापालाई चाडपर्वमा हर्षोल्लास छैन । दैनिक ज्यालादारीमै उनको दैनिकी बित्छ । बालबच्चाको पालनपोषण र शिक्षा खर्च जोहो गर्न नै उनलाई हम्मेहम्मे छ ।
आकासिदो महंगी बोकेर आएको चाड दसैं र तिहारको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ उनमा । बल्लतल्ल ऋण काढेर दसैंको खर्च जोहो गरेकी शर्मिलालाई फेरि नजिकिएको तिहारले समेत पिरोल्न थालिसकेको छ ।
दसैंमा गरेको खर्चको ऋण त छदैछ,फेरि दशैको ऋण तिर्नर तिहार खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताउन थालिसकेको छ । ‘बढदो महंगी र घट्दो कामले बिहान वेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल छ, कसरी दशैं तिहारको खर्च जुटाउने,’ उनले भनिन् ।
‘दिन भरी काम ग¥यो बिहान वेलुका खानै मुस्किल हुन्छ, एक पैसा बच्दैन कसरी दशै तिहार मनाउने, छोराछोरीले पिरोल्छन,’ उनी भन्छिन् ।
झिसमिसै उठेर घरको दैनिकीसँगै मजदुरी गर्नु उनको दैनिकी हो । बिहान र दिउँसोको चर्को घाममा इँटा, ढुङ्गा माटोको काममा नै उनको समय बित्ने गर्छ । दैनिक ज्यालादारीमा ठेकदारको कृपामा दिनभरी काम गर्ने र त्यही ज्यालाले बिहान बेलुकाको गर्जो टार्दै आएको उनले बताइन् ।
दैनिक काम गर्न चाहदा समेत सधै काम पाइदैन । काम नभएपछि हातमुख जोड्न समस्यया हुने उनले बताइन् । ‘दैनिक ज्यालादारीमा गए मात्रै हातमुख जोर्ने जोहो हुने हो,’ निर्माणको मसला मल्दै उनले भनिन्, ‘चाडवाड, आयो भनेर सबै हाँसीखुसी छन् हामीलाई के को चाडवाड ? चाडवाड कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न बिस्माद् भने जस्तै भएको छ ।’
वर्षायाममा चुलिएको निर्माण सामाग्रीको मुल्यसँगै निर्माणको काम सुस्ताए पछि ऋणमा डुवेको उनले बताइन् । ‘पहिले दैनिक घरखर्च चलाउन लिएको ऋण त तिरेको छैन, अव कसले फेरि ऋणमाथि ऋण देला ? उनले भनिन्, ‘सास राख्न त गाह्रो भो केको मिठो मसिनो ?
दुइमहिना पहिले मध्ये बर्खामा निर्माणको काम रोकिएकै वेला माईली छोरी टाइफाईडले थला पर्दा उपचार गर्न इष्टमित्र र छिमेकीसँग लिएको सापट समेत उनले तिर्न सकेकी छैनन् । ‘मुख देखाउन लाज भइसक्यो,’ गहभरी आँसुपार्दै उनले भनिन्, ‘हामी गरिव दुःखी त उपचार नपाएर मर्ने दिन आइसक्यो, अब कसरी हर्षोल्लास गर्नु ?’
उनका तीन छोरी र एक छोरा जनप्रिय स्कुलमा पढ्छन । खाजा, नास्ता, कापी कलम र ड्रेसको धान्नपनि हम्मेहम्मे छ । श्रीमान बिरामी भएकाले परिवार पाल्ने बोझ शर्मिलामाथि नै छ ।
श्रीमान रामबहादुरका अनुसार पत्नीले दैनिक ६ सय रुपैयाँ कमाउँछिन् । उनीहरुको धादिङको सल्यानटारमा एउटा सानो झुप्रो र एक हलको बारी थियो । खेतीबाट पेट पाल्न मुस्किल भएपछि कामको खोजीमा परिवारसहित पोखरा छिरेको शर्मिलाको परिवार दसैं मान्न घर फर्कन सकेको छैन ।
बसपार्क सुकम्वासी टोलका दिलबहादुर नेपालीको अनुहारमा पनि कुनै खुसी र उत्साह छैन । ठूलो परिवार कमाइ छैन । दैनिक काम पाउदैन् । बेलावखत आउने चाडपर्व, बन्द हड्ताल र दैवी प्रकोपले नियमित काम हुदैन ।
खर्च भने बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतन्जेल भइनै रहन्छ । ‘बिहान देखि बेलुका सम्म रामघाटमै बालुवा चाल्दा र बोक्दा मै दिन बित्छ । दिनभरी बालुवा बोकेर कमाएको ६ सय रुपैयाँ बेलुका घर फर्कदा घरखर्चीको जोहोमा नै सकिन्छ । चाडवाड ंमान्ने कौडी छैन,’ उनले दुखोसे पोखे ।
उनले खर्चको अभावले दसैंमा छोराछोरीलाई सामान्य खर्चमै थामथुम पार्ने योजना बनाएको बताए । सात वर्षदेखि पोखराको सेती नदीमा बालुवा चाल्दै आएका उनलाई अव तिहार मनाउने खर्चको जोहो गर्ने चिन्ताले सताएको छ । ठूलो परिवार, बिहान बेलुकाको रोजिरोटीको समस्या त छदैछ । उनलाई तिहारमा टोल, छिमेक र घरघमा गरिने झिलिमिली र मीठो मसिनो खानेकुराको बन्दोवस्ती कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
लमजुङको चितीबाट पोखरा आउँदा उनका सपना थियो– ‘पति–पत्नी दुवै पोखरा बसेर मजदुरी गर्ने, छोराछोरीलाई राम्रोसँग शिक्षादिक्षा दिने र कमाईबाट बचेको पैसाले एउटा सानो घर बनाउने ।’ तर उनले पोखरा भित्रदा देखेको सपना सपना मै सिमित बन्यो ।
ज्याला मजदुरीले जीविका चलाउदै आएको उनको परिवारलाई छाक टार्नै सकस छ । दुइ छोरा र तीन छोरी छन् । छोराछोरी सानै भए पनि मजदुरीमा खटिन्छन् । नाबालक छोरा पनि दैनिक काममा सहयोग गर्छन । ‘बिहान बेलुकाको छाकटार्न र छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउन सकस छ । हामी जस्तालाई चाडबाड आउँछन, पारिवारिक झगडा बढाउँछन, ’ नेपाली भन्छन् ।
पोखराको पृथ्वीचोकलगायतका स्थानहरुमा रहेका सुकम्वासी बस्तीका अधिकांस महिला र पुरुषले सेती नदीको बालुवा चाल्ने र बोक्ने काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । बालुवा चाल्नु उनीहरुको दैनिकी बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १७, २०७६, ०१:०९:००